Izibalo zithinta kanjani ukutholakala kwemali?
Ngezinombolo zamanani kanye nemali kudlala indima ebaluleke kakhulu. Uma ufuna ukugcina imali esikhwameni sakho, khona-ke kufanele nakanjani ukwazi ukuthi idijithi ngayinye imele. Ake sicabangele inombolo ngayinye ngokuningiliziwe.
Inombolo 0 no-1
Kokubili u-0 no-1 kukhona izinombolo ezingenalutho, ngakho-ke akukho phuzu ekukhulumeni ngabo, kufana nokukhuluma lutho.
Kusukela ekucabangeni kohlangothi lwezezimali, i-deuce iwuphawu lokulondoloza nokuhlupheka. Ngaphezu kwalokho, inombolo 2 isho umqondo womsebenzi, isidingo sokuzinikela, ukwabelana, ukunikeza.
Uma uqala ukukhuluma ngemali, kufanele ugweme le nombolo. Ukuboleka 200, 20 noma 2000 kusho ukuboleka ngaphandle kwembuyiselo, ngoba ayikho isiqinisekiso sokuthi isikweletu sizovalwa. Ngaphezu kwalokho, imali ebolekiwe ngeke ibuyisele noma iyiphi inzuzo kumboleki, iyosebenzisa imali, kodwa akukho lutho oluthengiwe. Ngisho noma uthola imali yakho emuva, khumbula ukuthi lokhu akuyona imali, kodwa ihhashi leThrojani. Ngemuva kokuphumelela, okungeke kuhlale isikhathi eside, okulindelekile ngeke kulungiswe. Lapho ukwandiswa kwemholo kukhonjisiwe, kubalulekile ukwesaba lezi zibalo ezibalwe ngenhla. Vumela isamba sibe okungenani ama-kopecks angama-50 amaningi noma ngaphezulu.
Manje ake sikhulume ngamanani nokuthenga. Khumbula ukuthi into entengo, enenomboro 2, uzodumazeka noma kungadingekile. Akudingekile ukutshala imali emabhange amabili, amaphakethe amabili noma amabhonki amabili. Iqiniso liwukuthi lo msulwa uhlobene nokuvukela umbuso, ukweba nokukhwabanisa. Akuyona ize ukuthi abakhohlisayo namasela aseShayina Diyu bajeziswa enombolo yehhovisi 2.
Leli nani linamandla futhi livulekile. Kusho ukwandiswa kusuka ezincane kuya ezinkulu, ukuvela kwekhwalithi entsha, amandla. Ngaphezu kwalokho, i-troika ibonisa ukuvela kwesimo esisha, isenzo esivamile, isenzo, isenzo.
Inomboro yesithathu iyafaneleka kakhulu ekusetshenzisweni kwemali, hhayi ukuqoqwa, ngakho-ke kunzima kakhulu ukusindisa ama-dollar angu-300 noma angu-30 ku-bank piggy. Umuntu othile uzokuchitha. Kodwa inani elinjalo lilula kakhulu ukuboleka, hhayi ngisho nanye, kodwa ezintathu. Isibonelo, isaga sesiNgisi sithi umuntu oyedwa angakholeka imali kathathu. Uma unquma ukudlala i-voltereyu, khona-ke uthenge amathikithi amathathu kuphela. Ngakho-ke, amathuba okuwina azokhula kaningi.
Inombolo 3 - inamba yamasu amasha, ngakho-ke kusuka kule nombolo ungaqala ibhizinisi elisha, isibonelo, ukuvula isitolo. Kodwa futhi, ungalindeli inyanga yonke, unesikhathi sokuphila. I-Troika iphinde ikhulume ngamabhizinisi amabhizinisi ayingozi futhi ikhombisa isimo sengqondo esibucayi mayelana nemali noma ukungafani komvuzo owutholiwe emizamweni esetshenzisiwe.
Lezi ezine yisimo esimisiwe sezezimali, inkokhelo, impesheni, inzuzo, iqoqwe imali yosuku lwemvula. Lezi yimali ezitholwa ngumsebenzi wabo, isiqinisekiso sesikhathi esizayo, ukwethenjwa nokuhle okulindelwe. Uma ufaka imali engu-40, 400 noma engu-4000 ebhokisini lemali, ngeke ahambe noma yikuphi futhi uyisebenzise kuphela uma unquma futhi kuphela kulokho abaqoqayo.
Inombolo 4 - ukuthengwa okujwayelekile, izitolimende zezitolimende, isabelomali semindeni, izinkokhelo zenyanga zesevisi kanye nenzalo evela kubhange. Ngaphezu kwalokho, luphawu lokuhlelwa kwesabelomali.
Abangane abane bazohlala bethola ulimi oluvamile, futhi abangane abane bangabangela ibhizinisi eliphumelelayo futhi bathembelane. Kodwa konke kufanele kutholakale ngamandla akho. Lezi ezine yizinga elihlala lilindele izixazululo ezijwayelekile, ezivamile. Isinyathelo nale namba asibungane. Imiholo ye-4000 noma i-400payut njalo, kodwa ukwanda kokulinda kudinga isikhathi eside kakhulu. Izindleko ezincane ezivela ezindaweni ezine zingcono kakhulu kulabo abathanda ukuhlala benemali, ngaphandle kokufaka ingozi. Ngaphezu kwalokho, lezi zine zingasho ukuthi ngeke kube khona ukukhula komsebenzi nokunye.
Uma i-trio ibhekisela ekusebenzeni kwezezimali, lezi zine zizinzile kanye nokuqoqwa kwemali, bese kuthi abahlanu bathi sekuyisikhathi sokusebenzisa imali. Lokhu kusho ukuthi inani lesihlanu liwuphawu lokuthenga nezindleko, kanye nokwanda kwezindleko esikhathini esizayo. Ngaphezu kwalokho, le nombolo ibonisa ukuthi udinga ukuqala ukuhlela.
Gcina isamba se-stash esingu-500, 50, 5000 akufanele, lokhu akusizi lutho, ngoba uyayisebenzisa ngokushesha. Iyisihlanu inombolo enikezwe izindleko, ngakho-ke kungcono ukuthatha imali engcono kakhulu esitolo sokudlela, ohambweni, ohambweni lwebhizinisi, eholidini. Imali enjalo imnandi kakhulu ukuchitha izipho kubantu abathandekayo ezintweni ezithandekayo enhliziyweni. Lawa mahlanu azokusiza ukunqoba, ngakho uma wenza umnikelo, ungathola okuningi. Khumbula ukuthi isibalo sesi-5 siyisamba semali. Kodwa ungacabangi ukuthi amasenti akho amahlanu, elele ebhange e-piggy, izoba ama-ruble angu-5. Wenza imali eningi yemali yakho.
Eyisithupha - le namba iyajwayelekile futhi yansuku zonke. Izimali ezinjalo zabiwe ukudla, ukukhokhelwa ngezitolimende, ukulungiswa kwezicathulo, njll.
Eyisithupha isevisi, sebenzela uhulumeni. Uma unabantu abayisithupha emndenini noma emndenini, bese uhlala ucingo ucingo, thola imali, okudingeka uyithole futhi awukwazi ukukhuluma nganoma iyiphi inzuzo. Lezi ezinye imikhawulo emkhakheni wezezimali kanye nokuhamba ngezinyawo ekusebenzeni imisebenzi.
Umuntu onalesi sibalo akayona eyisimo salo, kodwa angakwenza lokho eyedwa.
Iyisikhombisa inamba eyingozi yezimali. Imali efana nokuzinza, hhayi ukumangala. Inombolo 7 idala izimo ezinjalo umuntu angakwazi ukuchaza nokugwema.
Okuyisikhombisa inani lokulahlekelwa. Inkampani lapho umuntu oneminyaka engu-7 esebenza khona, ngeke akhulise imali. Bazoba, baphange, bakhohlise futhi bahlukumeze abanye ngaso sonke isikhathi. Izilinganiso ze-700, 70, 7000 azikwazi ukugcinwa, zifakwe ebhange ukuze zifakwe, zinike futhi ziboleke, bequeath. Izibalo ezinjalo ziyakwazi ukuletha inhlanhla. Yazi ukuthi "i-777" yinombolo ekhuphula imali kuphela kubanikazi bekhasino, kodwa hhayi kubavakashi bayo.
Okuyisikhombisa akuhambisani nemali, kuletha ububha nobuphofu.
Eyisishiyagalombili yinombolo yokuhamba okungapheli kwemali. Inombolo 8 - yi-receipt yemali nemithombo ehlukene ngokuphelele.
Inombolo 8 - ukungenisa nokuthekelisa, inzuzo nokulahlekelwa, izikweleti nemali, ifa kanye nentando, ukuthengiswa nokuthengwa, ukuza nezindleko - lokhu kuyimidlalo engapheli yokukhulisa nokunciphisa. Lezi yizinkokhelo zemali, izimali, amazinga okushintshaniswa kanye nezindleko, inzalo.
Abangu-8 banganika imali, noma bathathe okugcina. Uma ufuna ukuthenga amasheya, khona-ke thatha ngokushesha 8. Inombolo 8 ibonisa izinguquko eziqhubekayo zezezimali, ukunethezeka nokulinganisela. Uma izimali zakho zilawulwa ngumuntu we-8, khona-ke kukhona kuphela imiphumela emibili. Kungaba khona kuleli bhizinisi, noma ungesabi ukulahlekelwa lutho. Ukuphila kwethu kuwumdlalo lapho kukhona ukunqoba nokunqotshwa.
Isishiyagalolunye ayifani neze ngemali nenhlalakahle. Kunalokho kuthiwa akukho mali noma ukuthi ayikho inzalo ezindabeni zezezimali. Inombolo eyisishiyagalombili inika umuntu ukuhlakanipha nokuqonda ukuthi empeleni injabulo ayikho emalini. Lolu uhlobo lwempumelelo, umphumela noma isimo lapho imali engeyona ebaluleke kakhulu.
Awudingi ukuqhuba ukuthengiselana ngemali engu 90, 900, 9 noma 9000. Akekho ozakwethu abathola lezi zibalo bafuna ukusebenza, futhi akukho isinyathelo futhi asikho isifiso sokwenza imali.
Kodwa imali enjalo inganikelwa kalula, intshalwa emisebenzini yamasiko futhi isebenzise ekuthengeni kwemisebenzi yobuciko. Ngaphezu kwalokho, ungakwazi ukunikeza izinambuzane kahle.
Iyishumi - lokho akulutho neze. Ngakho-ke, akukho okuzoxoxa ngakho. Inombolo eyishumi iyunithi efanayo, futhi njengoba sesivele siyayazi 1 ilingana no-0. Okufanayo kungashiwo ngo-100 no-1000.
Izindlela eziningi zokwenza impilo yakho ibe ngcono
Izaqathe ngo-honey glaze
I-pudding kathathu ye-chocolate
Ama-postcard amahle ne-Epiphany of the Lord ngoJanuwari 19, 2018
Ungenza kanjani ikhadi ngoFebhuwari 23?
Emuva okuhle: ukuqeqeshwa kwamafutha atshisayo
Ukuphila komuntu siqu kaVictoria Daineko
Indlela yokubhekana nomkhuhlane ovamile?
Izindandatho Zokuzijabulisa Zomdabu
Izingane ezingu-7 ezingenayo inkathazo: izidakamizwa, izidakamizwa, izisulu zezimo ezibuhlungu
I-ovocado oil: ukwakheka, izindawo kanye nokusetshenziswa ku-cosmetology